UJason C. Bost, Esq. , I-MBA-NJ kunye ne-NY yeNdawo yokuThengisa iiNdawo, uMkhenketha, uKhuselo loKutyhilwa kunye namaGqwetha abaGqithisi
ikhaya / Amalungu eQela/ UJason C. Bost, Esq. , MBA
INew York-Ukulawula uMlingane
[Imeyile ikhuselwe]	Tel: 1-844-533-3367 x50
Kutheni ndiyonwabela ukuba yiGqwetha loKhuselwa eNtsholongweni eNew York
Ukukholelwa kwam ekubuyiseleni, kunye nokunceda abo basweleyo kuye kwandigcina ndibandakanyeka kwiinkqubo ezisekwe kuluntu ukusukela oko ndaqala umsebenzi wam we-25 kwiminyaka edlulileyo. Emva komsebenzi ophumelelayo kwishishini lokuzonwabisa, ukusebenza nabaxumi kwiiprojekti ezininzi zeGrammy ezikhethiweyo kunye ne-Grammy (iphulo lokuzonwabisa lingafumaneka) Apha), Ndaye ndagqiba kwelokuba ndibuyele esikolweni kwaye ndafumana iMBA kwiTekhnoloji yoLawulo ukusuka eNew Jersey Institute of Technology kunye ne-JD (degree degree) yeRutgers School of Law eNewark. Ngelixa eRutger ndifundele ndadibana nabanye abanetalente emangazayo, abathathu kubo abaya kuthi kamva babe ngamaqabane ethu ekusebenzeni komthetho apha Patel, Soltis & Cardenas. Kwakungamaqabane am apho ndaziswa kukhuselo ekubonakalisweni kwaye ngokukhawuleza ndafumanisa ukuba, ngokusebenzisa umthetho wokukhusela ukubonakala kweNew York, ndaphinda ndakwazi ukubamba isandla ngokunceda kwaye ndiqhubeke nomnqweno wam wokuba "ndibuyise" kubantu abasweleyo .
Umthengi elityala lam lokuqala lokuzikhusela ekuchazeni imeko yakhe wayekhe waqesha abameli babini abahlukeneyo ukuba bamncedise ukulwa nengqondo yakhe kwaye ngelishwa kuye, bobabini abameli bexesha elidlulileyo basilela ukubonelela ngoncedo olukhulu, xa enokuthi omnye asuswe, ngokwenxalenye yezenzo zakhe kwimeko yakhe . Ngaphandle kokuthetha, lo mthengi wayenganyanzelekanga ukuba athembele kumagqwetha ngelo xesha. Umtshana wakhe, owayekwanalo negqwetha, uye weza kunye nam xa wayedibana nam, Emva kokundigcina ndisebenza kwityala lakhe, ndakwazi ukuzithethelela ngokuchasene nesenzo sokuchazwa kwangaphambili kwaye ndathethathethana ngempumelelo nokutshintsha kwemalimboleko kuye kwanyanzela ibhanki ukuba irhoxise isenzo sabo sokwazisa kwaye ndanceda umthengi wam ukugcina indlu ayesebenzela nzima kuyo ukuthenga. Alithandabuzeki elokuba, wayechwayitile kwaye engaphaya kokubulela! Akukho zinto zininzi zifezekileyo zobungcali ezibonelela kum ngovuyo olukhulu njengokunceda umxhasi ukufikelela kwiinjongo ezinxulumene nekhaya labo. Nokuba bafuna ukulwa ukuze bagcine amakhaya abo, bakhusele ixesha elingakumbi emakhayeni abo ukuze baphuhlise isicwangciso sexesha elide, okanye baqalise inkqubo yokulahleka kokulahleka kulungiselelo lokugcina amakhaya abo okanye bathengise amakhaya abo ngenkqubo yentengiso emfutshane, Nokuba yeyiphi na injongo yomthengi, ukulwela ukubanceda bafikelele kum, ngumsebenzi endiwonwabisayo ngokupheleleyo.
Iindawo Zokuziqhelanisa zibandakanya:
Uyilo lweShishini (leNzuzo-yeNzuzo kunye neLingeloNzala)
Ubulungu Kwezemfundo / IBar:
Isikolo soMthetho iRutgers, eNewark, JD. '13
Iziko leTekhnoloji eNtsha laseJamani MBA '09
State Univ. eNew York eBrockport, BS '07
Ilungu, Ibha yaseNew York